Gọọmentị Nepal kwesịrị ikwuputa mpaghara njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Nepal » Gọọmentị Nepal kwesịrị ikwuputa mpaghara njem
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Nepal • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Ọrụ Mgbasa Ozi Waya • WTN
Ebe E Si Nweta: Ozi Njem Nleta
Ndị ọchụnta ego njem nlegharị anya nke Nepal na -ezukọ ime ka mmemme gọọmentị dị mfe:
Emechiela Nepal maka ụlọ ọrụ kacha enweta ego n'ihi COVID-19
Nzukọ nke ndị isi njem nlegharị anya, nke onye bụbu onye isi oche nke Nepal Tourism Board haziri, Deepak Raj Joshi kpebisiri ike ịrịọ gọọmentị ka ewepu ihe mgbochi iche maka ndị njem ọgwụ mgbochi iji kpalie njem nlegharị anya na Nepal.
N'ịrụ aka na a na -agba ndị ọrụ njem nlegharị anya n'ihu ọgwụ mgbochi, ọ bụ otu dị iche iche ka gọọmentị Nepal ga -ekwupụta na ọ bụ ngalaba mepere emepe.
Na mgbakwunye, otu ahụ na -agbasi mbọ ike ịmaliteghachi visa na mbata na nkwalite ule PCR n'ọdụ ụgbọ elu.
Mgbe ngalaba nke Nepal nwere oedere n'okpuru mgbochi ụfọdụ, dị ka ụlọ ihe nkiri sinima na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ atụ nwere ikike 50%, mana enwebeghị mmelite mmachi njem Nepal n'ime ọnwa isii.
Onye ode akwụkwọ PATA Suman Pandey sonyeere n'echiche na mgbe ndị bịarutere ga -enye ndị njem ọgwụ mgbochi visa ha ma wepu ihe mgbochi iche. Ọchịchị e hiwere n'oge na -adịbeghị anya ka ga -ejupụta ọtụtụ oghere ọkwa kabinet, ya na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na -etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, yabụ a ga -ahụrịrị ma ọ bụrụ na gọọmentị nwere ike ịme ihe ọ bụla iji kpalite mpaghara a dị mkpa nke akụ na ụba Nepal.
Deepak Raj Joshi bụkwa onye nnọchi anya Nepal na Network Tourism Network, e nyekwara ya isonye na mmemme ndị dike njem nlegharị anya nke WTN.
Kedu ka Suite dị na Sandals Luxury Resorts